Mookids ဆပ်ကပ်ပဟေဠိ - တရုတ် Ningbo Mianxuan
အင်္ဂါရပ်များ: Eco-friendly ပစ္စည်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Non-အဆိပ်မျက်နှာပြင်ပန်းချီဆိရဲ့အသိဉာဏ် OEM အလို့ငှာလာအောင်နှိုးဆွဖို့ကစားကစားစရာဟန်ဆောင် 100% Mookids ကစားစရာ Co. , ပထဝီ, ဆက်သွယ်ရေး၏သာလွန်သည့် Ningbo Chian, တွင်တည်ရှိသည်ကြိုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကလေးများကစားစရာများနှင့်ကလေးထုတ်ကုန်အတွက်အထူးပြု။ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်ဈေးနှုန်းများ, ကျနော်တို့ကကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာသင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ w ပိုပြီးရွေးချယ်မှုနှင့်တိုတောင်းပေးပို့အချိန်, ဒါပေမယ့်လည်းပိုကောင်းထုတ်ကုန်မသာထောက်ပံ့စျေးကွက်များကဲ့သို့အဆင်သင့်အချက်များ share ...
ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားကြိုဆိုပါတယ် www ။ mookidstoy .com နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရန်မျှော်လင့်, စီးပွားရေးဆွေးနွေးပါ။
Beech Wood ကကလေးပညာရေးဆိုင်ရာ သစ်သားကို Block
1, ပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာ: သစ်သားပိတ်ပင်တားဆီးမှု, သစ်သားပဟေဠိ, ကလေးတွေကစားစရာဂိမ်း easel, ပုတီးကလေးကစားစရာ, ပေသီး, ချိန်ခွင်လျှာစက်ဘီး, ကလေးကစားစရာအရုပ်, ယာဉ်ကစားစရာ, သစ်သားကားကို, ရထားကစားစရာ, လေယာဉ်အရုပ်, သစ်သားဒုံးပျံ, ဂီတကစားစရာ။
2, အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုသင်ကြား: မွန်တက်ဆိုရီပစ္စည်းများ, Froebel နှင့်အခြားသင်ကြားရေးပစ္စည်းများ။
3, ကစားကစားစရာဟန်ဆောင်: မီးဖိုချောင်ကစားစရာ, ခုတျကစားစရာ, ပရိဘောဂကစားစရာ, သစ်သားအရုပ်အိမ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကစားစရာ။
4, မူကြိုပရိဘောဂ & ကစားကွင်း: ကလေးများအိပ်ရာ, စားပွဲ, ကုလားထိုင်, စားပွဲ, အစိုးရအဖွဲ့, မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပကစားကွင်းနှင့်အခြားကစားစရာ။
5 မြှင့်တင်ရေးဆုကြေးဇူးကိုကစားစရာ: သစ်သား YoYo, kendama, ကစားစရာတလျှောက်ဆွဲ, etc
6, OEM / လိမ္မော်ရောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြိုဆိုသည်။
အသိဉာဏ်ပညာရေးဆိုင်ရာ ABC ရုပ်သံတံဆိပ်ခေါင်းများထုံးစံ 3d ပဟေဠိ diy ကစားစရာသစ်သား jigsaw ပဟေဠိ
** ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း: EXW, FOB, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး, CIF
** Loading ဆိပ်ကမ်းကို: Ningbo / ရှန်ဟိုင်း
** တင်ပို့ခြင်း: ပင်လယ်နားမှာက, လေအားဖြင့်အမြန် by
** Pament သက်တမ်း: ထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီ T / T 30% သိုက်နှင့် B / L ကိုမိတ္တူဆန့်ကျင် 70% ချိန်ခွင်လျှာ; 100% ဘယ်သို့မျက်မှောက်မှာ, L / C; paypal; ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ;
** နမူနာအချိန်: ခန့် 7-14days
**ပို့ဆောင်ချိန်: 40-55 ရက်အတွင်း
** ကုန်ပစ္စည်းအာမခံ: ကျနော်တို့လက်ခံရရှိဖောက်သည်အရည်အချင်းပြည့်မီနေကြသည်ထုတ်ကုန်အာမခံပါသည်။ ဆိုကျိုးအစိတ်အပိုင်းများလြှငျ, pls ကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့ အသေးစိတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဓာတ်ပုံများ, ပြီးတော့ကျနော်တို့အမှန်တကယ်အခြေအနေများအရသိရသည်သင်အစားထိုးပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
, NDA လက်မှတ်ထိုးသင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အခြားသူများအားရောင်းကြဘူး; ကြီးမားသောအမိန့်အဘို့, ငါတို့သည်လည်း
** ပစ္စည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပါသလား သငျသညျ FSC ပစ္စည်းထောက်ပံ့နိုင်ပါသလား? Professional နဲ့ certificated ပစ္စည်းအကျိုးရှိစွာ 2008 ခုနှစ်ကတည်းကကျနော်တို့ပေးပို့တိုင်းတစ်လခေါ်ဆောင်သွားကြသည်SGS စမ်းသပ်ဖို့အထူးအသုတ်ဆေးသုတ်။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဓာတ်ခွဲခန်းများရှိသည်။
FSC 2010 ကနေမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကြောင့်ဗြိတိန်စျေးကွက်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်
ဘုံထက် 10% မွငျ့မားကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူရယူ။
** သငျသညျအမရေိ / ဥရောပတှငျအခြို့သောဖောက်သည်ရှိပါသလား? ဘယ်ဖောက်သည်? ဥရောပနှင့်အမေရိကတိုက်ဒစ္စနေးကဲ့သို့, ဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်းနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဖြစ်ပါသည်,ပစ်မှတ်, ကစားစရာ R ကို, America မှာ Hasbro; Studio100, JMD, Metro, ဥရောပမှာရှိတဲ့လိုက်မယ် IKEA,
နောက်တစ်ခု: Mookids နာရီ
3d ပဟေဠိဆောက်လုပ်ရေး Kit
စိတ်တိုင်းကျ Jigsaw ပဟေဠိ
DIY ပဟေဠိ Toy
Funny Jigsaw ပဟေဠိ
IQ သင်တန်း Jigsaw ပဟေဠိ
IQ သစ်သား Block ကိုပဟေဠိ
Jigsaw ပဟေဠိ Mini ကို
သက်တံ့ရောင်သစ်သား Toy Jigsaw ပဟေဠိ
round Jigsaw ပဟေဠိ
Wood က 3d Jigsaw ပဟေဠိ
သစ်သား Jigsaw ပဟေဠိ
သစ်သား Toy ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများပဟေဠိ
သစ်သား Toy Jigsaw ပဟေဠိ